शब्दकोश: गोली गजलमा
गोली चलाउनैपर्छ तर सिर्जनात्मक कोटिमा । गोलीबिना न त मोडिएको खोली फर्किन्छ न त झोली नै भरिन्छ । तर अहिलेसम्म चलाउनेहरुले हिंसा उछाल्दै सखाप पार्ने घातक गोली नै चलाए । तर यतिमै प्रहारको चरम नमूना खत्तम भएको छैन । केही कोटिका गोली प्रखर छँदैछन् सिर्जनात्मक नाल सोझ्याएर आफैँलाई सुविख्यात पार्दैछन् । नत्र त यसअघि गोली चलाउनेहरु सबै कुख्यात रुपमै लोकको आँखामा दरिए ।
यस्तै भातीमा गोली चलाउनेहरुसँग पछिल्लो सरसङ्गतिमा झ्याम्मिन पाएको फलस्वरुप मैँ पनि गोलीप्रेमी हुन पुगेको छु । तिनका बाटो त पुरानै थिए तर चाल र त्यो चालको सुर भन्ने भिन्नै पाराको लाग्यो मलाई । मेडिकल कलेजमा व्यवस्थापकीय कार्यभार ग्रहण गर्दै र डाक्टर बन्ने धुनमा लहरिएका ठिटा-ठिटी गजलको अनौठो आवेगमा अभिव्यक्त भएको देखेर गोली नचाखेका 'भावनामयी बिरामीहरु' एकदम निको हुँदै गएको दिनप्रतिदिन पाइरहेको छु म । नेपाल मेडिकल कलेजका बाबु त्रिपाठी, निरज भट्टराईको सन्दर्भ यहाँ जोड्न लाग्दैछु । त्यही लहरमा राबत, डा सुधा शाहीहरू पनि छन् । अर्कोतिर 'नजरका इशारा' कृति लिएर आएका माधव खतिवडाको गजल जादुगरी पनि लोभलाग्दो छ । यी सबैको कलमको टुप्पोमा सामाजिक सन्तुलन र नयाँ आयाम निर्माणको लागि जीवनदायी बारुद सजिएको छ । र त्यो बारुद छ नि कसो-कसो छातीकै टेबलमा सजाइरहूँ जस्तो सुहाउँदो फूलदानी समान छ ।
बाबु त्रिपाठी जसले भर्खरै 'बा' गजलकृति प्रकाशन गरे । निरजको पनि 'मेरो भन्नु केही छैन' गजलसङ्ग्रह सार्वजनिक गरिसकेका छन् । उनीहरु लेखिरहेछन् गजल लेखिरहेछन् कविता । तिनको गर्व हेर्नलायकको छ । तिनको नाम साहित्यिक अभिलेखमा टिप्न महत्वको छ । ती गोलीमै लेखिरहेछन् र सबैभन्दा ठूलो कुरो तिनको गोली चाख्न सबै तयार हुँदैछन् । अहिले सीमित सर्कलमा चर्चामा होलान् यी गोलीधारीहरु बिस्तारै अरु सबैतिर चिनारीमा विस्तार हुने नै छन् । कारण वास गुम्सिएर कहाँ बस्छ र, फैलिन्छ नै । उनीहरुसँगै जमघटहरुको उपज हो मैँ पनि गजलमा गोलीकै प्रवाह दिने ध्याउन्नमा आफूमा पहिलेभन्दा अलि अलग धार तिखार्ने मेलोमा लागेको छु । यो धार सुरुवाती हो यसकारण भुत्ते होला नै । बाँकी मूल्याङ्कनका लागि आफ्नो नयाँ एउटा गजल यहाँ पेस गरेको छु ।
हुन्छ सबै कुराको पनि आयु हुन्छ
हिउँका चुचुराको पनि आयु हुन्छ ।
अनुकूल हुन्जेल त हो बाँध्ने नाता,
अँगाल्ने पाखुराको पनि आयु हुन्छ ।
जाबो निशानाले कति नै पछ्याउला,
उछ्रिने दादुराको पनि आयु हुन्छ ।
दिक्क बुहारीलाई कति लाग्दो हो,
"यी सासू-ससुराको पनि आयु हुन्छ ।"
कसो नफिर्ला र यी निमुखाको दिन,
पर्ख न, टुहुराको पनि आयु हुन्छ !
Posted by Jotare Dhaiba at Tuesday, January 26, 2010
Its relly nice gajal.
दीपक जडित January 27, 2010
सुरुमा कोहि गजलकारकै सुचर्चा लेखिएको लेख पढ्न पाउने भएं भन्ने लाग्दैथियो तर त्यतिमात्र नभएर चर्चाका साथसाथ आफ्नो रचनात्मक पर्चा पनि राख्नुभएको रहेछ । भन्न त सुरुवाती धार भन्नुभएको छ, यो अलग धारमा लागेको छु भन्नुभएको छ तर माथीका दुई शेरहरु भने मलाई निक्कै तिख्खर लागे ।
राजेश बुढाथोकी 'नतांश' January 29, 2010
कसो नफिर्ला र यी निमूखाको दिन
पर्ख न, टुहुराको पनि आयु हुन्छ ।
धाइबा जी, गजलले घत लाग्यो है । यस्तै विवरणात्मक टाँसोहरु राख्दै जानुहोला । तपाईको प्रस्तुतीकरणको शैली मलाई असाध्यै मनपर्ने गर्छ ।
कृष्णपक्ष January 29, 2010
धाइबाजीले जसरी यहाँ काफिया प्रयोग गर्नु भएको छ, त्यसले मलाइ धेरै आकर्षित गरिरहे धेरैबेर । अब्बल छ गज़ल ।
aajad ajanawi January 31, 2010
oh!Its very nice & metaphorical gajal.
go ahead making new stream in the field of gajals.
अविरल यात्री February 03, 2010
गजलको काफिया देखी शिल्प र प्रस्तुती अनी सबै नै शेरहरु एकसे एक देखे वास्तव मा नै भन्नु पर्दा बेजोड गजल, मेरो ब्यक्तिगत मुल्यङ्कनमा। यात्रा यहाँको चाहना अनुरुप नै बढीरहने छ भन्ने आशा छ।
गोकुल ढकाल February 09, 2010
धाइबाजी, सुन्दर गजल ।
फ्युज गएको ज्यान, बिजुली मन !
जीवनभित्र एउटा रेखा